इन्फो प्लस Archives - Page2of 15 - Living with ICT
Home / इन्फो प्लस (page 2)
सकियो २३ औं संस्करणको ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक’, ३ लाख बढिले गरे अवलोकन
कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको आयोजनामा सञ्चालित २३औं संस्करणको ‘सुबिसु क्यान ईन्फोटेक २०१७ ईन एशोसिएशन विथ सामसुङ’ मंगलबार सम्पन्न भएको छ । ६ दिनसम्म चलेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी मेलाको गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री माननीय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले समुद्धघाटन गरेका थिए । महासंघले सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले सन् १९९५ देखि प्रत्येक …
सर्वाधिक विक्रि हुन सफल १० मोबाइल फोन
Dec 31, 2016	0
अहिले अधिकांश मानिसका हात हातमा मोवाइल छन् । थरी थरीका मोवाइल, स्मार्टफोन, ट्याब्लेट र फ्याब्लेटहरुले हाम्रो जिवनशैली नै सहज बनाइरहेको छ । तर, हामिले इतिहास फर्केर हेर्दा यसमा धेरै रिसर्च, लगानी र उत्पादनहरु भएका छन् । मोटोरवालाको सेटदेखि अहिलेको वान प्लस थ्रिसम्मका मोवाइलहरु आउदा धेरै परिवर्तनहरु भए । आइफोनको ठुलो बजार र सामसुङको मोवाइल दबदवा अहिले चलिरहेकै छ । तर …
स्मार्टफोन प्रयोग गर्दैहुनुहुन्छ तर फोन सुस्त भएर हैरानी खेपिरहनु भएको छ ? फोन स्लो भएका कारण तर्पालाई साथीभाइहरूको स्पीड मोबाइलका अगाडी आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्न लज्जाबोध त भइरहेको छैन ? सुरूमा खरिद गर्दा तेज गतिमा चल्ने तपाईको मोबाइल हिजोआज बिस्तारै सुस्त हुँदै गइरहेको त छैन ? यदि यस्तै समस्यमाबाट ग्रसित हुनुभएको छ भने तपाइँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । यी …
राेचक तथ्य : माेबाइलकाे पहिलाे पुस्तादेखि साताैं पुस्तासम्म
Dec 3, 2016	0
१. मोबाइल नेटवर्कको पहिलो जेनेरेशन (1G) को कमर्सियल अटोमेटेड सेलुलार नेटवर्कको सुरुवात सन् १९७९ मा जापानमा एनटिटीले गरेको थियो । यो एमपिएस स्ट्यान्डर्डमा रहेको थियो । एनालग प्रविधिमा रहेको आवाजका लागि मात्र प्रयोग हुने यसको स्पिड १ केबिपिएसदेखि २.४ केपिपिएससम्म रहेको थियो । २. सन् १९८० देखि १९९० को बीचमा जापान र अमेरिकाबाट सुरु भएको जिएसएम प्रविधिमा आधारित दोस्रो पुस्ताको …
के हो लिनक्स ?
युनिक्सजस्तै लिनक्स कर्नेल प्रयोग गर्ने कम्प्युटर सञ्चालन प्रणालीलार्इ दिइने नाम हो । लिनक्स खुला तथा स्वतन्त्र सङ्खटवेयरमध्येको अभूतपूर्ण उदाहरण हो । लिनक्स अथवा जिएनयु र लिनक्स कम्प्युटरका लागि एउटा free and open source software, operating system हो । याे भनेको स्वतन्त्र तथा खुला स्रोत सफ्टवेयर हो । यसमा free भनेको निःशुल्क होइन, स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग हो । लिनक्स एउटा कम्प्युटर सञ्चालन …
नेपालमा आइपी टिभी
नेपाल सरकारले २ वर्षअघि ‘इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन प्लाटफर्म’ सेवाको इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । एनआइटिभी स्ट्रिम्स प्रालि, ब्रोडलिंक, सुबिसु केबल नेटलगायतले सेवा सञ्चालनको इजाजत लिएका छन् । यसअन्तर्गत तोकिएका क्राइटेरियाहरु डेटा सेन्टर बनाउने, कन्टेन्टहरु ल्याउने, मेसिनहरु स्थापना गर्ने, सफ्टवेयर बनाउनेलगायतका पूर्वाधार पुरा भएको हुनुपर्ने नियम सरकारले ल्याएको छ । हाल एनआइटिभी स्ट्रिम्सले नेटटिभी र ब्रोडलिंकले ब्रोडटिभीको नाममा आइपी टिभी …
फ्रिल्यान्सिङमा सुमनको सफलता
फ्रिल्यान्सिङ (Freelancing) एक बिषेश कर्मचारी हो, जो स्वतन्त्र भएर आफ्नो तालिका अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमता बोकेको हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफ्नो खुवि प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यक्ति Freelancer हो । एमोजन, माईक्रोसफ्ट तथा गुगल जस्ता उत्कृष्ट कम्पनीकोहकले पनी Freelancer लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आधुनिक युगमा इन्टरनेट प्रविधिको माध्ययमबाट अन्तराष्ट्रिय कम्पनी तथा व्यक्तीले Freelancer लाई रोजगार दिएको हुन्छ …
मोवाइलबारे १० रोचक तथ्यहरू
१.संसारको पहिलो मोबाइल फोन मोटोरोला डाइना टिएससी ८००० एक्स १९७३ मा निर्माण गरिएको थियो जसको तौल १.१ केजी र मूल्य ३९९९ डलर रहेको थियो । २.संसारको पहिलो मोबाइल फोन सन् अप्रिल ३, १९७३मा कल मोटोरोला डाइना टिएससीबाट बेल ल्याबका डा. जोइल एस. एङगेलले मार्टिन कुपरलाइ गरिएको थियो । ३.संसारको पहिलो स्मार्टफोन आइबिएमले १४ अगस्ट १९९४मा निर्माण गरेको थियो जसको नाम …
कसरी गर्ने इ कमर्शमा खरिद बिक्री ?
अनलाइन सपिङको लागि तपाइसग इन्टरनेट सहितको मोवाइल भए पुग्छ । मोवाइलमा आफुलाइ चाहिएको प्रडक्टहरु छान्दै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ । तपाइले छानेको वा अर्डर गरेको सामान तपाइकै घरमा ल्याइदिने सुविधा पनि हुन्छ । सामानको पैसा प्रयोग गरिएको कुनै पेमेन्ट गेटवे मार्फत अनलाइनमै तिर्दा पनि हुन्छ नत्रघरमै सामान ल्याएर आउनेलाइ दिदा(क्यास अन डेलिभरी) पनि हुन्छ । कुनै पनि ईन्टरनेट बिजनेस कम्पनीहरू बिचमा …
स्टार्टअप फ्याक्ट – अमेरिकामा ४८ लाख स्टार्टअपको संख्या छ
Oct 17, 2016	2
विश्व अर्थतन्त्र सधैं स्टार्टअप र इन्नोभेटिभ बिजनेश आइडियामा भर पर्दै आएको छ । विश्वका ३८ देशमा Global Entrepreneurship Monitor ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार प्राप्त रोचक तथ्यांक यहा“ प्रस्तुत गरेका छौं : विश्वमा सबैभन्दा बढी स्टार्टअप हुने मुलुक अमेरिका हो, जहा“ ४८ लाख स्टार्टअपको संख्या छ । विश्वका मुलुकमध्ये जनसंख्याको आधारमा धेरै उद्यमशील हुने देश युगान्डा हो । त्यस देशको वयस्क जनसंख्यामध्य २८ …